🥇 ▷ A 100 MP camera, 90 Hz screen iyo in ka badan ayaa ah waxa aan ka heli doonno Xiaomi Mi MIX 4 ✅
A 100 MP camera, 90 Hz screen iyo in ka badan ayaa ah waxa aan ka heli doonno Xiaomi Mi MIX 4
Xogtii ugu dambeysay ee Xiaomi Mi MIX 4 taas oo aan ka wada hadalnay wax ka qabashada taariikhda soo-bandhigidda ay yeelan doonto Ka hor taas, waxaan faallo ka bixinay wax ku saabsan qaybteeda sawir, taas oo aan faahfaahin ka bixineyno in moobiilkan uu heli doono qalabka cusub ee 108 megapixel ISOCELL Brigth HMX oo ka socda Samsung.
Haddaba, sida ku xusan macluumaadkii ugu dambeeyay, Mi MIX 4 waxay qaadi doontaa boqol milyan oo kamarad gadaal ah, taas oo la mid ah in la yiraahdo waxay noqon doontaa 100 megapixels, dabcan. Dhanka, mobilada waxqabadka badan leh waxaa lagu qalabeyn doonaa shaashad leh xaddiga qaboojinta oo ah 90 Hz, iyo sidoo kale taageeridda ku dallaca deg-degga ah ee 40 watts. Waxaad sidoo kale yeelan doontaa kamarad hore loo soo qaaday.
The 90 Hz celcelis heerka qiyaasta iyo qolka kor u qaadida ayaa ah qaabayn caan ah maanta, sidaa darteed iyagu la yaab maahan. Marka laga hadlayo lacagta 40-watt ee degdegga ah, Xiaomi waxay si rasmi ah u shaacisay inay ku dhawaaqi doonto teknoolojiyadda ku-dallaca teknolojiyadda ka dhakhso badan tan maanta la isticmaalo.
Xiaomi Mi MIX 4 ayaa sifeeye ka hadashay ilo laga helay Weibo
Dadku waxay yiraahdaan Guddidu waxay soo bandhigaan xalka QuadHD + (2K) waxayna leeyihiin cidhifyo cidhiidhi ah, sida shaashadda Cascade ee Vivo Nex 3 ayaa lahaan doonta ama la mid ah. Jirka terminal wuxuu adeegsadaa naqshad saqaf leh oo buuxa, halka dusha sare aysan lahayn furitaan.
Waxaa xusid mudan in sidoo kale la tilmaamay waxaa lagu qalabeeyay aaladda moobiilka ee loo yaqaan ‘Qualcomm Snapdragon 855 Plus’ madal mobilada ah, kaas oo lagu buuxin doono mindhicirka aaladda oo ay weheliso isku-darka Ram oo ah ilaa 12 GB iyo 1 TB oo ah ROM. Intaas waxaa sii dheer, waxay la jaanqaadi kartaa shabakadda 5G, taas waa tan aan fileynay. Ogsoonow in 5G noocyo ah oo ah Mi Mix 3 la bixiyay. Dhanka kale, camera selfie waxaa lagu galin doonaa aalad wax soo saar ah, sida ku cad jagada kor ku xusan.